Anemone entwasahlobo, noma anemones, ngokuvamile ziqala eziqhakaza ngaphambi kwemithi ezihlabayo embozwe awugqinsi oluhlaza amahlamvu ezinhle. Anemones kufanele itshalwe umthunzi ngokwengxenye noma indawo shady. Lezi zitshalo mikhulu ukuzizwa uma atshalwe eduze otshanini noma ngaphansi kwezihlahla. nice kakhulu ukubukeka anemones, betshala nokunakekela lapho silula, uma ibekwe isizinda spiraea futhi Barberry yemifino, ngaleyo ndlela ebekela off ubuhle egcwele amahlamvu zabo obucayi entwasahlobo. Ngokwesibonelo, Anemone ihlathi ingenye kakhulu izitshalo enhle, okuyinto zitholakala amahlathi ethu kanye nezimfunda.
Nokho kungenziwa kuhlangene primrose, pansies , futhi melkolukovichnymi. Udinga ukwazi ukuthi zonke anemones uthanda olumanzi humus ukukhanya inhlabathi. Futhi Kuhle kokusho ukuthi ngaphansi anemones edingekayo ukuze silondoloze inhlabathi umswakama, kuze kube sekupheleni kwesizini, ngisho nangemva kokuba umoba abune away.
Spring anemones ukukhula ngokushesha kakhulu, kwakheka inkulu, kuhle Friend, courtines ngezinye izikhathi okuxekethile. Uma courtines icindezele omakhelwane bayo noma ulahlekelwe nomphumela walo zokuhlobisa, kudinga ukufakelwa. Zonke esihlalweni anemones engcono phakathi ehlobo. Yiqiniso, uma kukhona isidingo, ukufakelwa kungenziwa ekuqaleni ehlobo, futhi ngesikhathi anemones zezimbali. Lapho zitshala Akubalulekile ukumba aphume phansi lesi sitshalo ngokuphelele. Izinhlobo eziningi anemones kungaba ukukhiqiza kabusha kahle ngosizo sokuhlukaniswa izingcezu esigaxeni lapho izinso ukuphi.
Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha anemones, betshala nokunakekela kwabo zifana. Lapho ukutshala kuyadingeka ukubeka namahlumela kuyo le mpande ngesikhathi afika ku 10cm ukujula. Ezinye anemones, ezifana Rock and Ashera * abangamakhulu zingandiswa ngisho izingxenye ehlathini, amaswidi amancane. Nokho, uma ukutshala lezi zinhlobo kudingeka ukuthi ezingeni inhlabathi simila wahlala collar impande. Ngemva anemones yatshalwa, zidinga ukuthambisa avamile. Njengoba kushiwo ngaphambili, uma ufuna ukuzalela anemones, nokunakekela kwabo, ngokuvamile, akunzima, benjalo omkhulu sizijwayeze indawo entsha.
Zonke anemones, betshala nokunakekela ukuthi kwenziwe ngendlela efanele, okusakazwa imbewu kalula. imbewu plant Kunconywa ukuba nihlwanyele emhlabathini ebusika, ungakwenza entwasahlobo, kodwa kulokhu badinga ukuba afeze wokulungiselela babhekane nezinga elikhulu abandayo. Amahlumela zokuqala zihlume ngemva kwamasonto 2-3 emva kokutshala. izithombo Young ezikhulayo futhi ithuthuka ngokushesha, izimbali iqala ngonyaka wesibili.
Fresh kokwehla anemones kube mulched Peat noma humus. Into engcono kakhulu ongayenza mulching amahlamvu bawa of izihlahla ezifana Maple, oki, Linden noma columnar apula izihlahla, betshala nokunakekela babo futhi ezithakazelisayo. Lokhu siyoba analog umbala ihlathi phansi, lapho anemones zisetshenziselwa ngokuya imvelo. Uma umqhele anemones etshalwa cut, umanyolo ke okufanele sisetshenziswe lapho kukhona efihlekile.
Kusetjentiswa kahle ngoba amaminerali sigqoka fertilizer eziyinkimbinkimbi. Ukunisela iyadingeka ngesikhathi izimbali. Ngenxa yalokhu ukuthambisa linesizotha anemones kungenziwa etshalwe imbali imibhede lapho phambili ukuchelela eziyinkinga. Ekwindla, ngaphambi ukuqala ebusika, badinga ukumboza umquba eside egcinwe noma umquba utshani.
Njengoba sesivele wathi mayelana anemones, ukunakekelwa kanye okutshalwe lezi zitshalo ayiyona inkimbinkimbi ngamabutho kwanoma iyiphi wensimu amateur. Nokho, kunokuningi okungakhulunywanga ngakho, isibonelo, anemones ukushisa-onothando, banayo rhizomes tuberous. I ezingezwakali kakhulu kubhekwa Anemone castellated. Ukuze indawo yokuhlala ebusika badinga amahlamvu ngokucophelela. Bambe up nezilimo eziyizigaxa kufanele ngemva usuqedile yokukhula. Okokuqala, nezilimo eziyizigaxa kumele omisiwe, izinga lokushisa kugcinwa 20 - 25 degrees, khona-ke kumelwe eligoqiwe iwenze isendlalelo esisodwa emabhokisini bese efakwa endaweni efudumele umoya lapho izogcinwa okushisa esingeqile 20 degrees ukuna.
Ukutshala nezilimo eziyizigaxa emhlabathini ukuba ngo-Okthoba noma ngasekuqaleni kwentwasahlobo, lapho nje iqhwa liyancibilika. Abakwazi itshalwe izingxenye noma Nokho, sisonke, kuyadingeka ukuze ushiye "iso". Kufanele kuqashelwe ukuthi, uma nezilimo eziyizigaxa ku isitoreji ngaphambi kokutshala kufanele ofakwe amanzi afudumele usuku.
Indlela ukutshala amagilebhisi ekwindla - ukulungiselela izithombo nokutshala izigaba
Kanjani amandla XVM e World of Tanks
Hlobo luni ukuthuthukiswa libizwa postembryonic? isikhathi nangemuva kokuzalwa komntwana
I-Shulba Reservoir: incazelo, ukuphumula, amahemuhemu ngamadamu